सलहेशको फूलबारी | samakalinsahitya.com
सलहेशको फूलबारी पुग्ने हाम्रो अघिल्लो दिनको योजनालाई सहज बनाइदियो रातभर जाग्राम माइकले । २०७० साल वैशाख १० गते बिहानैको वासान्ती पवनले सुम्सुम्यायो हामीलाई । निकै उल्लासित मन लिएर लाग्यौँ सलहेशको फूलबारीतिर हामी एउटा अद्भूत सौर्न्दर्य नियाल्ने आकांक्षासहित ।
बजारको चलमलाहट देखियो । बिहानै सडकछेउमा उँघिरहेका गाईवस्तुहरू देखिए । चटारो हुनेहरू कुदिरहे । फुर्सद हुनेहरू चिया पसलमा झुलिरहे । नेपाली गाउँघरको प्रतिनिधि दृष्य थियो त्यो । बेहिसाब समय खेर फालेर गफगाफमा मस्त युवाहरू देख्दा मनमा अमिलो भरिएर आउने । यस्तै अमिलो सङ्लेर कुनै दीर्घ रोग लाग्ने हो कि आफैलाई ? म गरिब नेपाली समाज जत्तिकै उदासीमा छु ।
पैदल हिँड्न लालायित पयरहरू खुम्च्याइयो र लहानको गोधुलि होटलबाट निस्केर मोटर चढियो । जाबो पाँच किलोमिटर के हो र मोटरका लागि ? साठीसत्तरीको बेतोडले कुदेका पाङ्ग्राहरू लोकमार्ग छाडेर दक्षिणपट्टिको खेततर्फ घिस्रिएका मात्र के थिए, एकैछिनमै खेतको बीचमा रहेको फूलबारीमा पुगिहालियो ।
गोलाकार घेरा आकारमा संरक्षित सानो फूलबारी रहेछ सलहेशको फूलबारी । चौधौं शताब्दीका दुसाध जातिका राजा सलहेशले बनाएको फूलबारी कोइलीको कुहुकुहु र लहरैलहराले जेलिएका दुर्लभ वनस्पतिका रूखहरू भएर भेटियो । राजा फूलका निकै शोखिन रहेछन् मनमनै अनुमान गरेँ तर समीको रूखबाहेक अरू रूख भने चिन्न सकिन मैले ।
जताततै छरिएका बाख्राका बड्कौला कुल्चँदै हामी फूलबारीभित्र छिर्न खोज्यौँ ।
&apos;सरासर गए पनि वारपार गर्न कठिन छ, मन्दिरमा दर्शन गरेपछि बल्ल पुग्न सकिन्छ पारि&apos; दिलिपजी भन्दै हुनुहुन्थ्यो । जता फर्के पनि लहरैलहरा, हामी पनि अनभिज्ञ पन्थे, त्यसैले प्रतिवाद गरेनौँ कसैले । होला भनिदिएर अर्काको पछिपछि कुद्न धेरै सजिलो यो दुनियाँमा ।
&apos;वैशाख १ गते मात्र फूल फुल्ने रूख कता छ होला ।&apos; सबैको चासो त्यही रूखप्रति थियो ।
&apos;मन्दिर वरपरका यी रूखहरूमा फुल्छ त्यो फूल तर यसपटक दुईचार दिन छिटो फुल्यो ।&apos; दिलिपले सबैका खरिएका जिज्ञासामा शीतल पानी छम्कँदै हुनुहुन्थ्यो ।
&apos;दुईचार दिन झन् ढिला भयौँ हामी ।&apos; त्यो फूल हेर्ने आफ्नै मनको भित्री अभिलाषामा तुषारात गर्दै सान्त्वत्नाको न्यानोले आफैलाई सेकेँ मैले ।
मन्दिरभित्र रानी दिना मालिनीलाई अगाडि राखेर हात्तिमा चढेको राजा सलहेशको मूर्ति रहेछ । देवको मोबाइल-उज्यालामा खिचेँ मैले । मैले बटुलेका यस्तै केही फोटाहरूको सङ्क्षिप्त व्याख्यानसहित एउटा पुस्तक तयार पार्न पाए ! आधा शताब्दी भोगिसक्दा आफ्नै पाइलाले पारेका डोबहरूमा हिमाल, पहाड र तर्राईका सग्बगाउँदा छायाँहरू बटुलिएको सम्झेर रोमाञ्चित हुन्छु ।
सुखभन्दा पल्तिर खुसी फुलेको आँगनामा छुजस्तो लाग्यो मलाई त्यतिखेर । काठमाडौंको दुर्गन्धित वातावरण छोडेर शीतल हावाका लहरसँग रमाउँदै आफ्नै लाग्ने प्रकृतिको मादक सौर्न्दर्यमा हराएको थिएँ म । मैले आफैलाई पनि बिर्सिरहेको थिएँ । अरूलाई सम्झनु त सुँगुरले सगर हेर्नुजस्तै थियो ।
एकजोर चराका भुर्र आवाजले झस्काइदियो मलाई । बिचराहरू पनि त झस्केरै उडेका होलान् बतोडले । उनीहरू किन झस्के खोइ ? न म सिकारीजस्तो देखिन्छु, न त मेरा हातमा हतियार नै छ । न म चाल मारेर खोदीपाइला लाएको छु उनीहरूको न त उनीहरूप्रति लक्षित प्रहार दागेको नै छु । खोइ किन डराए बिचराहरू ! विचारको भुमरीबीच एउटा कारण फेला पारेँ - मानव जातिप्रतिको अविश्वास भोग्दै आएका छन् पुस्तौँपुस्तादेखि । शायद उनीहरूले मनमनै भनेका होलान् -
जहाँ जान्छु दैजालो खान, त्यहीँ पापी बथान बसेको !
निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले सलहेशको बारेमा हामीलाई जानकारी दिन थाल्नुभयो &apos;धार्मिक एवं ऐतिहासिक मनोरम यो फूलबारीमा सिरहा, सप्तरी, उदयपुर, धनुषा, महोत्तरी आदि जिल्लाका साथ भारतबाट आएका असङ्ख्य मानिसहरूको मेला लाग्छ प्रत्येक वर्ष। सलहेश दलितहरूका राजा थिए । उनले एउटा अमर इतिहास बनाएर गए ।&apos; धेरै कुरा जानकारी चाहिए पूर्व सभासद् रामप्रित पासवानसँग सोध्नु भन्दै अयोधी सरले उहाँको मोबाइल नम्बर दिनुभयो ।
&apos;सलहेशको दरबार सिरहा सदरमुकाम र सिरहाको फूलबारी पतारीमा थियो रे ।&apos; स्थानीय साथीभाइले जानकारी दिँदै किंवदन्ती सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो &apos;गोविन्दपुरको मानिक दहमा नुहाउने, फूलबारीमा फूल टिप्ने, सलहेशगढमा कुलदेवीको पूजा गर्ने, सिल्हट अखडामा कुस्ती खेल्ने र आफ्ना प्रजाको पीरमर्का सुन्ने गर्थे रे सलहेशले&apos; ।
साथीहरूले थप्दै जानुभयो &apos;सलहेशको लोकनाच र लोकगीत निकै प्रख्यात छ । नाचगानमा सलहेशको वीरताको वर्णन पाइन्छ । कृष्णाराम र सलहेशको भयानय युद्ध हुँदा दुबैको मृत्यु भएको थियो रे ।&apos; सधैँ राजाका बखान सुन्दा वाक्क हुने कान खोइ किन हो पट्याएका थिएनन् यसपटक । तर्राईका सिराहा, धनुषा र सप्तरी जिल्ला मिलाएर दलित राज्य बनाउन माग भएको प्रसङ्ग पनि उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो कसैले ।
&apos;सबै जातजातिलाई जोड्ने साँस्कृतिक कडीका रूपमा रहेको यो स्थानमा सन्तान प्राप्ति र मनोकांक्षा पूरा गर्न पूजा गरिन्छ । इच्छा पूरा भए पाठीको बलि दिने र कागजको छाता चढाउने चलन छ ।&apos; साथीहरूका भनाइलाई पानीछेउमा खुचमुचिएका कागजका छाताले प्रमाणित गरिरहेका थिए ।
पानी छ प्रशस्त । रूख छन् हरिया । घुमीघुमी हेरियो शीतल छहारीहरू । लाग्थ्यो, प्रकृतिमा सङ्गीत घोलिएको छ । नातिकाजी, अम्मर र शम्भुजितहरू यहीँ छन् । नारायणगोपाल, अरूणा र रामकृष्णहरू यतै छन् । चराका कलरव समेटिएको छ तीनका गीतसङ्गीतमा । पानीको मिहिन कलकल पनि उनीएको छ तिनका मन्त्रणामा । नदीका नागबेली, हिमालका चुली र बालीका बयली बिच्छयाएर तिनीहरू अनवरत साधनामा तल्लीन छन् ।
छेउछाउका मुसहर बस्ती हेर्दै कतै गाडीमा त कतै पैदल छिचल्दै होटल गोधुलितिर र्फकँदै थियौँ । मुसहर बस्तीका झुप्राहरू गरिबीले थुपारेका मरुभूमिका बालुवाको थुप्रा जस्ता लागे । ती अभावले चुसेर शेष करङकङ्काल बनेका गरिब कायाजस्तै थिए । र थिए, मधेशको चर्को घाम र हुरीले उडाएर बनेका अस्थायी वनेली पतकरजस्तै । कुनै जमानाका शोखिन राजाले र्सवश्वहरण गरेर दास बनाइएका जस्ता तिनका काया बोले - हामीले नागरिकता बनाएका छैनौँ, फोटोसहितको मतदाता नामावली कसरी बनाउने ? लोकतन्त्रको दुहाइ दिइरहेको तिनको मसिनो स्वर हुण्डरी मच्चाएर गगनभेदी बनेझैँ लाग्यो मलाई । त्यो ऐतिहासिक धरा पनि बत्तिमुन्तिरको अँध्यारोजस्तै लाग्यो ।
तिम्रो गाउँबस्ती चहार्न निस्कँदा तिमीलाई आफ्नै आँगनमा विरानो देखेर म रन्थनिएँछु । सबैका नजरले तिमीलाई विरानो ठहर्याएपछि विरानबस्ती नै उदास हुने गरी म आफैभित्र भक्कानिएँछु । आँसुका उद्गम बनेका यी नयनहरू निरदहमा डुबेछन् । र त, आँसु मनको गहिरो दहमा सङ्गालिएछ । मनमा सङ्गालिएको आँसुको दहमा म आफै डुबेँछु नउत्रने गरी । त्रि्रो आरक्षण र उत्थान कहिले हुने होला - औँसी पोखिएको मझेरीमा मनकै टुकीका भरमा मनसँग संवाद गर्दै आफ्नै वरपर घस्रिरहेको थिएँ म ।
कति छिटै होटलमा आइपुगिएछ । होटलमा पुगे पनि मेरो मनमा भने गरिब बस्तीको आलाप सुनेर मलिन हुन नसकेको फूलबारीको सौर्न्दर्य नाचिरहेको थियो । मलाई थाहा छ, मनमस्तिष्कमा फूलबारीको जस्तै चहक बटुलेर दुःखका क्षणहरू बिर्सनु छ । सुख पाएर पनि दुःख बाँचेकाहरू धेरै छन् दुनियाँमा । तर मैले दुःख भोगेर पनि सुखपर्ूण्ा खुसी फुलाउनु छ अधरका कलेटीमा । आजका दाग भोलिका घाउ बन्लान्, क्यान्सर लागेजस्तै विषाक्त र पीडादायी । तिनका असहृय छटपटीसँग रमाउनु छ भोलि । आजको रोमाञ्चक उज्यालो साँचेर हृदयमा भोलिको कचपल्टिँदो जीवन जिउनु छ । जसोतसो साँचेको त्यही उज्यालाका भरमा वर्तमान बाँचिरहेछु भोलिका लागि ।
होटलमा पुगेर लबिमा बस्दा एउटा आकृति देखाउनुभएथ्यो मधु सरले &apos;बेल्जियमपको म्यानाकम्पी&apos; । पिसाब गरिरहेको सानो ढुङ्गे बालआकृति रहेछ म्यानकम्पी । त्यो ढुङ्गे बालकले कहिलेसम्म पिसाब गरिरहने होला, सम्झेर हाँस्नुहुन्छ मधु सर । जुनसुकै जनावर वा मान्छेका साना बच्चा असाध्य सुन्दर हुन्छन् । सुन्दर हुनाले ती सबैका प्रिय भएका हुन् । काखमा लिएर खेलाउने तीब्र इच्छाले कुत्कुत्याउँछ मलाई तर म्यानकम्पी बेपरबाह मुतिरहन्छ । उताको म्यानाकम्पी बेहिसाब समृद्धिको पिसाब गरिरहेछ । यताका म्यानाकम्पीहरू दलित बस्तीका गरिबीसँग गुडुल्किएर कुपोषण मुतिरहेछन् ।
म अझै सलहेशको फूलबारी वरपरका गाउँबस्तीमै रहेँछु ।